ओलीको आक्रोश : माधव नेपाल लाजसरम पचेको मान्छे, दाहाल छेपारोले जस्तो रंग फेर्ने मान्छे – Ramailo Sandesh
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति अमर्यादित टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको अन्तरविरोधमा नेपालले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएकोमा ओलीको तीव्र आक्रोश छ ।
७० औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाल लाज–सरम पचेको मान्छे भनेर टिप्प्णी गरे । ‘माधव नेपाल भन्ने एक जना कांग्रेसको पछाडि कुद्ने मान्छे छन्, नेपालको राजनीतिमा सबैले चिन्छन्, किनभने असाध्यै चर्चा भइराख्या छ ।
यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुने रहेछ’, ओलीको भनाइ थियो, ‘कम्युनिस्टको सरकार ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर भन्ने । यस्तो लाज–सरम पचेको मान्छेको चर्चा सकारात्मक हिसाबले होइन, नकारात्मक हिसाबले हुन्छ ।’
आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आइसकेको भन्ने नेपालको भनाइप्रति पनि ओलीको आक्रोश थियो । ‘आफै धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो । मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ?’ ओलीले भने,‘ अरु कोही नपाएर केपी ओलीले त्यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राख्ला ? एक ढंगले भन्ने हो भने यी प्रचण्डका पुच्छर हुन् ।’’
पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा नेपालले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर गरेको तर त्यसालाई मान्न नसकिने बताएका थिए ।
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति पनि कठोर टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले दाहाल छेपारोले झैं रंग फेर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘उनले राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै राम्रो भने पछि मानिसहरु छक्क परेका छन् । किन छक्क मान्ने ? छोपारोले रंग एकछिनमा फेर्छ त । खैरोखैरो मुढामा गयो भने खैरो रंग बनाउँछ । हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रंग बनाउँछ । अलि कालोकालो बोक्रो भएकामा पुग्यो भने कालोकालो बनाउँछ ।’
ओलीले दाहालले अन्य राजनीतिक मुद्दामा पनि बोली फेर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ । कहिले यस्तो हुँदा पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसेका छन्, किन हस्ताक्षेप गर्दैन भन्छ’, ओलीले भने, कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भन्न पुग्छ । कहिले राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै ठीक भन्छ ।’
दाहालले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गरेकोसमेत ओलीले गम्भीर आरोप लगाए ।
ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमाथि पनि प्रहार गरे । उनले कांग्रेसले प्रचण्डपथको मार्गदर्शन सिद्धान्त अँगालेको आरोप लगाए । ‘कांग्रेसका नेताहरु नै नाथुराम गोड्से खोजी गर्ने, खोजी गर्दा भेटिएन भने आफैं हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेपछि प्रचण्डपथ नै अँगालेको हो’, ओलीले भने ।
ओलीले प्रचण्डपथको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा पनि भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले प्रचण्डपथ सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ । फ्रान्स र बेलायतका राजाहरु किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दारहेछन् र पो त काटिंदा रहेछन् अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ ।
यो कुरा त प्रचण्डका एक जना कार्यकर्ताले सर्वोच्चमै भने’ ओलीको भनाइ थियो, ‘नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले नाथुराम गोड्से मै बन्छु अर्को ठाउँमा भने ।’
ओलीले अदालतमा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्तिमा आउँदा पनि न्यायाधीशहरुले रोक्न नसकेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन । हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नु हुन्न अथवा विद्वान अधिवक्ताजी तपाईं आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुस् भनेर के न्यायमूर्तिहरुले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नु हुन्न र ?’, ओलीको प्रश्न छ ।
ओलीले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई विचारबाट चल्ने भन्दा पनि खेतालाका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनको आलोचना गरे । उनले राजनीतिलाई संसदबाट निरुपण गर्न नसक्नेहरु प्रधानमन्त्री माग्दै अदालत गएको भन्दै विपक्षको विरोध गरे ।
किन प्रहरीको पन्दमा सपना रोका मगरको हाम्रो टिम नेपाल ?